UCanzibe 18, 2018 admin
Unionbank e Philippines libonisa izixhobo zemigodi Bitcoin
Bitcoin iyaqhubeka ukutsala ingqalelo amaziko ezemali. Ibhanki likhulu kwi Philippines, Unionbank, iye thaca izixhobo zezimbiwa Bitcoin ngexesha kwinkomfa.
Oku kuphawula ibhanki inkulu kokurhweba esidlangalaleni Bitcoin.
amaqabane Infosys-Indiya kunye neebhanki womnatha yimali yorhwebo blockchain-based
Infosys isaphonononga ubugcisa blockchain ukuzisa ukusebenza ezintsha lokuthengisa ngemali.
Uthungelwano yorhwebo blockchain-based ilungiselelwe ukuba kufakwe iinkqubo zoshishino yimali yorhwebo kwaye ibandakanya iinkalo ezifana ubunini yosebenzo, Uqinisekiso amaxwebhu kunye neentlawulo.
Ukuya phambili, iqela inenjongo yokudala i “blockchain ecosystem esibanzi, ngolo hlobo inegalelo ukwamkelwa olukhulu obu bugcisa,” wathi Ajay Gupta, Jikelele kwi ICICI Bank.
Tel-Aviv stock exchange ukusebenzisa blockchain ukuze platform yokubolekisa entsha
I-Tel Aviv Stock Exchange uphelekwe Accenture ne The Floor, i fintech hub Israeli, ukwakha iqonga izibambiso yokubolekisa blockchain ejoliswe ukuvumela abolekisa ngqo zonke izixhobo zemali.
Eli qonga liza kusebenza njengendlela “omnye-stop-shop kuyo yonke imisebenzi izibambiso yokubolekisa, avumele ukufikelela izibambiso imithamo emikhulu phakathi elifutshane ngexesha-asikiweyo, ngisho nokuqhuba kwizikhundla ezimfutshane-term,” a press release ithi.
Kumazwe ahlukeneyo, bitcoi...
Post Previous:Njani omnye ukuqikelela ukuziphatha ngomlinganiselo cryptocurrency ngokwemigaqo inani odolo?
EyoMqungu 19, 2019